Ciidamada Puntland oo howlgal ku qabtay Khamri farabadan - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Ciidamada Puntland oo howlgal ku qabtay Khamri farabadan
Ciidamada Puntland oo howlgal ku qabtay Khamri farabadan
Saacadihii la soo dhaafay ayaa Ciidamada Booliska dowlad Goboleedka Puntland waxaa ay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen Magaalada Badhan ee Gobolka Sanaag, iyada oo la sheegay in howlgalka ay ku qabteen Khamri farabadan.
Saraakiil ka tirsan Taliska Qaybta Booliiska Gobolka Sanaag ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabtay 27 dhalo oo maandooryaha Khamriga ah, kaas oo lagu qariyay Guri ku yaal Magaalada Badhan.
Sidoo kale wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in howlgalka sidoo kale lagu qabtay dad doonayay inay ka Ganacsadaan Khamriga, kuwaas oo Guriga ku sugnaa, isla markaana dhawaan Maxkamad la horgeyn doono.
Ugu dambeyn War kasoo baxay Taliska Qaybta Booliiska Gobolka Sanaag ayaa lagu sheegay in howlgallada ay noqon doonaan kuwo si joogto ah looga fuliyo degaannada Gobolka si loo xaqiijiyo ammaanka.
Ciidamada Booliska dowlad Goboleedka Puntland ayaa dhowr jeer ooh ore howlgallo kala duwan oo ay fuliyeen ayaa waxaa ay gacanta ku dhigeen Khamri farabadan iyo dad ka Ganacsanayay & kuwa la doonayay in la soo geliyo Magaalooyinka Maamulkaasi Puntland.
Previous articlePuntland oo digniin u dirtay Shaqaalaha Ajaanibta ah ee ku sugan degaannadeeda
Next articleDHAGEYSO: Barnaamijka barakacayaasha 19-7-2021